नर्मल डेलिभरि पछि यौन सन्तुष्टिमा कमि आएको भनि श्रीमानको गुनासो : डा. नुतन शर्मा – Krazy NepaL
November 9, 2020 1950
जसले एक शिशुलाई ९ महिला कोखमा राखि हजारौं दुःख कष्ट गरेर उक्त्त शिशुलाई जन्म दिन्छिन् बदलिदो समय सँगै हरेक कुराहरु परिर्वतन भईरहेको छ । यसैगरि बच्चा जन्माउने तरिकामा पनि त्यतिकै फरक आएको छ । अहिलेको अवस्थामा विभिन्न कारणले गर्दा महिलाहरुले सामान्य भन्दा अप्रेशनगरी बच्चा जन्माउनेको सख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गईरहेको छ । के अप्रेशन गरेर बच्चा जन्माउनु राम्रो हो ? अप्रेशन पछि के कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ ? यस्तै विभिद जिज्ञासाहरुलाई मेटाउनका लागि महिला स्वास्थ्यकि संम्वाददाता समृद्धा के.सी ले स्त्रीरोग विशेषज्ञ नुतन शर्मा सँग गरेको कुराकानी :
५. अप्रेशन गरेर बच्चा जन्माए पछि अर्को बच्चा जन्माउन कति वर्ष कुर्न पर्छ ?
सुझाब भनेको यही हो कि समय मै डेलिभरी हुनु पर्यो , सहि उमेरमा बच्चा जन्मायो भने आमा र बच्चा दुबै स्वस्थ हुन्छ । स्वास्थ्यको राम्रोसँग ख्याल गर्नहोस् तथा सकेसम्म नर्मल बच्चा जन्माउन सुझाब दिन्छु ।
Prevमुक्तिनाथको दर्शन गरी कार्तिक २४ नोभेम्वर ९ सोमबार तपाइँको भाग्य कस्तो छ ? राशिफल हेर्नुहोस्
Nextआफ्नो भाउजुले नन्दको श्रीमान सङ्ग बिहे यसकारण गरिन,नन्दाको अगाडी भाउजुले खुलाइन खास कुरा हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)